PressReader - Ilanga: 2018-10-25 - UFISA KWEHLISWE ISIBALO SONGQONGQOSHE UMBOWENI
UFISA KWEHLISWE ISIBALO SONGQONGQOSHE UMBOWENI
Ilanga - 2018-10-25 - Izindaba - INTATHELI YELANGA editor@ilanganews. co.za
UFUNA kube nongqongqoshe abangevile ku-25 kwikhabhinethi kaMengameli Cyril Ramaphosa uNgqongqoshe wezeMali uMnu Tito Mboweni, njengoba ethi kugcina sekubanjwa kuyekwa ngendaba yamaholo kuhulumeni kwazise agcina efika ku-R500 billion ngonyaka.
Uveze lokhu esigcawini sabezindaba izolo ngoLwesithathu ngaphambi kokwethula isabelomali sakhe saphakathi nonyaka obeku- ngesokuqala njengoba engakaqedi nenyanga ekulesi sikhundla esishiywe nguMnu Nhlanhla Nene.
Uthe kabukho ubuhlakani ekubeni ikhabhinethi yaseNingizimu Afrika ibe nongqongqoshe abawu-35 namasekela, okwenza isibalo sifike ku-70. Wenze isibonelo ngeChina athe inomnotho onamandla kodwa inongqongqoshe abawu-25.
"Lokhu kusenza singabi nesizathu esiphusile ngokomnotho, ngokwemali noma ngokwepolitiki ukuthi singaba nekhabhinethi enabantu abangaphezu kuka-70," kusho uMnu Mboweni othe ukukhushulwa kwamaholo ezisebenzi zikahulumeni kuzodlula ibhajethi ngo-R30.2 billion eminyakeni emithathu ezayo.
Uthe usecele iminyango kahulumeni nezikhulu ukuba bazame ukugwema ukukhokhela izisebenzi ngokusebenza isikhathi eseqile ( overtime).
Udalule ukuthi umnyango womgcinimafa uyakhombisa ukuthi kayikho imali ebekwe eceleni ukuze kukhushulwe amaholo ngo-2019, okuyinto athi wazi kahle kamhlophe ukuthi izomqhatha kakhulu nezinyunyama.
Uthe ongqongqoshe kubalulekile babeneqhaza elikhulu abalibambayo ekwehliseni ukusetshenziswa kwemali kuhulumeni ngokwehlisa inkece abayithola ngokuhlomula emahho- visini abo ( office benefits).
Usho lokhu nje, kuzokhumbuleka ukuthi nangasekuqaleni konyaka uMnu Ramaphosa uke wathi kufanele kube khona lapho kuncishiswa khona eminyangweni nakubona ongqongqoshe.
Ungqongqoshe ngamunye uhola imali elinganiselwa ku-R2.4 million ngonyaka, amasekela abo ahola elinganiselwa ku-R1.9 million kanti ungqongqoshe uvumeleke ukuqasha izisebenzi ezilinganiselwa ku-10 ehhovisini lakhe.
...ukuthi singaba nekhabhinethi enabantu anbangaphezu kuka-70.
UFISA kwehliswe isibalo songqongqoshe uMnu Tito Mboweni ongungqongqoshe wezemali.